December 17, 2016 – Sumcadda Islaamka
Khilaafka iyo kala qoqobka wuxuu ka mid yahay dhibaatootinka ugu daran ee aadanaha soo food saara. Islaamku waa uu ka digay khilaafka waxa uuna ku tilmaamay SHAR الخلاف شر. Khilaaf iyo kalatag bulsho ku dhaca waxaa ugu daran midka diimaysan waayo kaas lagama kabto caqligana ma dawayn karo sawabtoo ah qofku wuxuu aaminsan yahay in khilaafkiisu uu jiho alle taageero ka haysto. Diinta islaamka waxyaabaha ay ka digtay ayuu safka hore kaga jiraa khilaafka diimaysan. Waayo alle wuxuu ku canaantay ahlul kitaabkii in ay is khilaafeen kadib markii ay…
ISLAAMKA IYO IS KALLIFKA
Walaal waa inoo muhiim inaan ogaanaa inuusan ilaahay marna inagu kallifin waxaan tabartayo aheen. Ilaahay wuxuu yiri:- لَا يُكَلِّفُ اللَّهُ نَفْسًا إِلَّا وُسْعَهَا ۚ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَعَلَيْهَا مَا اكْتَسَبَتْ ۗ رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِن نَّسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تَحْمِلْ عَلَيْنَا إِصْرًا كَمَا حَمَلْتَهُ عَلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِنَا ۚ رَبَّنَا وَلَا تُحَمِّلْنَا مَا لَا طَاقَةَ لَنَا بِهِ ۖ وَاعْفُ عَنَّا وَاغْفِرْ لَنَا وَارْحَمْنَا ۚ أَنتَ مَوْلَانَا فَانصُرْنَا عَلَى الْقَوْمِ الْكَافِرِينَ (286) “Ilaahay nafna kuma kallifo waxaan taagteeda ahayn,naf kasta wixii aykasbatay oo khayr ahayay leedahay,waxaana loo raacanayaa…
YAAN LAGU XADGUDBIN XORIYADA RABI DADKA SIIYAY
Umadda nabigii loo soo diray scw ayaa lagu yiri gaarsiin kaliya ayaa korkaaga ah ee u dig oo u bishaaree cidii ku aqbashana waa hagaag ciddii ku diidana adiga xil kaama saarna. “فَإِنْ أَعْرَضُوا فَمَا أَرْسَلْنَاكَ عَلَيْهِمْ حَفِيظًا إِنْ عَلَيْكَ إِلَّا الْبَلَاغُ ” “Hadii ay ku diidaan adiga kuuma aanan soo dirin inaad waardiye ka qabato kaliya howshaada waa gaarsiin oo kaliya. Waxaa la yaab leh dadka diintii ku soo daray oo isu xilsaaray shaqo ka baxsan tii nebi muxamad scw loo soo diray,ee dadka daba galaya ama khasab…